स्मार्ट वाचका लागि स्ट्र्याप छान्दै हुनुहुन्छ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् - Technology Khabar
» स्मार्ट वाचका लागि स्ट्र्याप छान्दै हुनुहुन्छ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
हिजोआज स्मार्ट ब्याण्ड र स्मार्ट वाच निकै लोकप्रिय ग्याजेटका रुपमा आइरहेका छन्। स्मार्ट ब्याण्ड र स्मार्ट वाचहरु स्ट्र्याप फेर्न मिल्ने र नमिल्ने दुई तरिकाका हुन्छन्।
तपाईँले किनेको स्मार्ट ब्याण्ड र स्मार्ट वाचमा स्ट्रयाप फेर्न मिल्ने छ भने तपाईँलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको स्ट्र्याप होस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो।
तर स्ट्र्यापहरु कस्तो खालको, कुन कम्पनीको वा के आधारमा किन्ने भन्ने कुरामा अलमलमा पर्नुभएको छ भने तलका केही बुँदाहरुमा ध्यान दिनुहोस्:
सामान्यतया स्मार्ट वाचको स्ट्र्याप फेर्नुका पछाडि केही कारण वा उद्देश्य पक्कै हुन्छ। तपाईँलाई स्पोर्टस् वा आउटडोर एक्टिभिटीका लागि वा स्टाइलिस देखियोस् भन्नका लागि पनि स्ट्र्याप फेर्न मन लागेको हुन सक्छ।
यसबाहेक आफ्नो लुगा सुहाउँदो हिसाबले पनि स्ट्र्याप फेर्ने उद्देश्य रहेको हुन सक्छ। स्ट्र्याप फेर्ने उद्देश्य वा कारण एउटा मात्र नहुन सक्छ। तर यिनै कारणहरुले तपाईलाई उपयुक्त रंग, उत्पादक वा मेटेरियलको स्ट्र्याप छान्न मार्गनिर्देश गर्दछन्।
स्ट्र्याप छान्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को मुख्य कुरा भनेको यसको साइज हो। बजारमा उपलब्ध अधिकांह स्मार्टवाचहरु २२ वा २० मिलिमिटरका हुन्छन्। कुनै कुनैमा भने १८ मिलिमिटरका स्ट्र्याप पनि हुन्छन्। यसरी स्ट्र्यापको साइज छान्दा स्मार्टवाचको डायल कत्रो छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि एप्पल वाचको डायल ३८ ४० ४२ वा ४४ मिलिमिटरका हुन्छन्।
यसरी डायलको साइज अनुसारको स्ट्र्याप छान्न सकेमा यो ज्यादै ठूलो वा ज्यादै सानो हुने सम्भावना कम हुन्छ र प्रयोग गर्न पनि सहज हुन्छ।
३. के बाट बनेको हो?
स्ट्र्याप फेर्ने पक्कापक्की भइसकेपछि र त्यसको उद्देश्य र साइज निर्क्योल भइसकेपछि अर्को ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको किन्न लागेको स्ट्र्याप कुन कच्चा पदार्थबाट बनेको हो। यस्ता स्ट्र्यापहरु गुणस्तर र बजेटका हिसाबले धातु, नाइलन तथा छालाजस्ता विभिन्न पदार्थहरुले बनेका हुन्छन्। यीमध्ये आफूलाई कुन सुहाउँछ र मन पर्छ वा प्रयोग गर्न सहज हुन्छ त्यस हिसाबले स्ट्र्याप छान्नुपर्ने हुन्छ।
प्रयोगका हिसाबले यदि तपाईँ आउटडोर वा स्पोर्ट्स एक्टिभिटीका लागि स्ट्र्याप लिँदै हुनुहुन्छ भने नाइलन, सिलिकन वा पोलियुरेथनजस्ता ओसले नबिगार्ने पदार्थले बनेकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसैगरी स्टाइलिस देखिन वा प्रोफेसनल हिसाबले प्रयोग गर्नुछ भने छाला वा धातुले बनेका स्ट्र्यापहरु उपयुक्त छनोट हुन सक्छन्।
स्ट्र्याप किन्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा हो यसको डिजाइन। नयाँ स्ट्र्याप कुन डिजाइनमा बनेको भन्ने कुराले पनि तपाईँको सोचाइ प्रयोग वा सन्तुष्टिमा फरक पार्दछ।
५. कहाँबाट किन्ने (स्रोत)
स्ट्र्याप किन्ने पक्का भएर साइज मेटरियल तथा उद्देश्य अनि डिजाइनको कुरा मिलिसकेपछि बिर्सन नहुने अर्को तथ्य हो स्ट्र्याप कहाँबाट किन्ने वा यसको स्रोत के हो?
तपाईँले सम्बन्धित कम्पनीबाट नै उत्पादित स्ट्र्याप किन्दै हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बाहिरी कम्पनीले उत्पादन गरेको सामान किन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ।
खेति मोबाईल एप र उपाय सिटी कार्गोबीच सहकार्य